Nhau - Nerutendo rudiki uye mwenje mudiki, yechipiri Fang Piano Charity Concert yakabatwa zvakanaka
Nerutendo rudiki uye mwenje mudiki, yechipiri Fang Piano Charity Concert yakabatwa zvinobudirira
Manheru aDecember 31, 2020, yechipiri yerubatsiro konzati yakabatana yakarongedzwa nemuridzi wepiano Fang Yan uye nesangano rerudo "Dandangzhe Foundation" rakabudirira kuitirwa muXiamen Hongtai Concert Hall. Kuita kwakanakisa kwakakwezva vateereri. Pakaitika kuombera. Xiamen Yuxin Diamond Tools Co., Ltd. uye Huarui Culture vane rukudzo rwekutora chikamu mukutsigira.
Iyi konzati haisi yekungoita piano mashandiro, asi zvakare mabasa erudo. Kunge konzati yekutanga yerudo, mari yese kubva kukonzati iyi (mushure mekubvisa mari yekushandisa) inozopihwa Fujian Dandangzhe Foundation, yakatsaurirwa kune "Kirasi yega yega ine Bhuku Kona" rekuverenga, nekushandisa mimhanzi, mutauro wakanaka kwazvo, ku tsigira kuverenga kwemhando yepamusoro kwevana vekumaruwa. Panguva imwecheteyo, iyi zvakare mhinduro yakanaka kuXiamen Municipal Party Committee uye danho reHurumende rekuvaka "Loving Xiamen".
Pamusoro peiyo piano repertoire, konzati yacho inosanganisirawo zvidiki uye zvakasiyana zvemimhanzi. Fang Yan uye vaimbi vazhinji vanoimba pamwe chete. Iko kusanganiswa kwepiyano, violin uye mamwe mafomu eunyanzvi kunoita kuti konzati iyi iwedzere kusiyana. Vatambi vekuita senge mudiki violinist uye mukuru weChina Youth Symphony Orchestra (NYO-China) Xie Liyuan uye mudiki wepiano Li Guochao anobva kuGerman akaunza mabiko emimhanzi kune vateereri.
Rudo runobatidza rudo uye hupenyu hunokanganisa hupenyu. Xiamen Yuxin Diamond Tools Co., Ltd. iri vakazvipira kupa yepamusoro mangoda maturusi kuti kongiri vachikuya uye makorari pamusika uye vachishingaira kusimudzira kukura China uriri indasitiri. Izvo zvave zvakare zvichishingairira kutora zvemagariro mutoro mune ramangwana. Yuxin anoenderera mberi nekupindura kune zvemagariro, achiwedzera mipiro kune zviitiko zveveruzhinji, uye nekuendesa kudziya nerudo rwevashandi vedu vepasi kunharaunda!
Concrete makorari Mapedhi, Simbi Yakasungwa Daimondi Kukuya Mavhiri, PCD Kukuya Shangu, Diamond Kwayedza Bhutsu, Trapezoids Daimondi Kukuya Shangu, Concrete vachikuya Shoes,